Majlisni Oromiyaa,sagantaa deeggarsaa qopheese irratti Muslimoonni dammaqinaan akka hirmaatan afeere | NuuralHudaa
Manni marii Dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa, manneen marii dhiimmoota Islaamaa naannoolee biroo dursuun hojii jajjabduu hojjechaa jira.
Akkasumas caaseeffamaafi daambii ittiin bulmaata mana marichaa koree jijjiirama Dhaabbilee Hawaasa Muslimaa Saglanii fi koree hayyootaan qophaa’e irratti hundaa’uun waggoota Sadan dabran kana keessatti caasaalee mana marichaa duraan ture sadarkaa ganda irraa hanga naannootti argamu jigsuun hojiiwwan guguddoo birootis hojjachuun ni yaadatama.
Haata’u malee hojiiwwan karoorfaman hedduun sababa hanqina Baajataa/Faayinaansii mudate hordofuun gufachuu ibse. Rakkoo Faayinaansii mudate kana furuuf immoo ummanni Muslimaa deeggarsa akka taasisuuf gaafate.
Haaluma kanaan Jum’aa Ramadaan 18,1442 (Ebla 22), mata duree “torbii deeggarsa Majlisa Oromiyaa” jedhuun sagantaa galii walitti qabuu torbaan tokkoof turu labse. Ummanni Muslimaa biyya keessaafi ala jiru dammaqinaan akka hirmaatus gaafate.
1. Wiirtuu Majlisa Oromiyaa fakkaatu kan waajjira, madda galiifi galma of keessaa ijaaruu
2. Ijaarsa bara kanatti Muslimoota miliyoona sadii miseensa majlisa Oromiyaa gochuuf waraqaa eenyummaa qopheessuun hanga dhumaatti itti deemuu.
3. Caasaalee majlisaafi koreelee akka ulamaa Fatwaa, du’aataa, dargaggootaa, hayyootaafi dubartootaa gulantaa majlisaa hundarratti ijaaraman hojii irratti bobbaasuu, leenjii ga’aa isaanii kennuu, keessumaa koreen Da’awaa bakka hanqinni da’awaa jiru irratti akka hojjatan gochuufi
4. Humna namaa ga’aa ta’e kan dhaabbataan majlisa kana keessatti ummata Muslimaa tajaajilu gulantaa hundarratti oomishuuf ta’u ibsame.
Sagantaan galii walitti qabuu kun Masjidoota naannoo Oromiyaatti argaman hunda keessatti, akkasumas Masjidoota hawaasa Diyaaspooraa alatti argamanitti ni gaggeeffama jedhamee eeggama. Karaa lakkoofsa herreega Baankiiwwan garagaraa irraa banamaniinis gargaarsi kan walitti qabamu tahuus ibsame.
Lakkoofsi Baankii Majliisni Oromiyaa bane kuniin
1. CBE (Baankii Daldala Itoophiyaa) 1000396921999
2. CBO (Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa) 1042200017968
3. OIB (Baankii Internaashinaala Oromiyaa) 4192080
4. AIB (Awaash International Bank) 01410449821400
5. Nib Bank 7000023371249
6. Wegagen Bank 0878202815401 fi
7. Bunnaa Bank 2779691000002 tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
mashallaah Tabarakallaha Rabbin isii haa Gamachisuu hojii kesanii namaa tii tolaa jaladhaa
waan bareduu jiraan itti fufaa
Inshaa Allaaha Affenii Rabittinii Issinnii Walinii Jiraa JZK Jazzanii Kessanii Jennettaa Ha Ta.uu
Nasir mahommed suleyman says:
mashallah hedduu waan garii hojachuuf kayefatan Rabbiin galmaan nuf haa gahu! Ishaa Allah isin waliin jiraa yadaa fi deggarsaa haga Rabbiin nuf lafisee.